Dezanove Imba - Dhizaini magazini
Chitatu 20 Ndira 2021
Imba Kurudziro yemugadziri uyu yakabva kune yakaumbwazve eucalyptus huni ye "bateas". Aya ndiwo maplatifomu ekugadzira mussel mumvura uye anogadzira indasitiri yakakosha kwazvo mu "Ria da Arousa", Spain. Eucalyptus huni inoshandiswa mune aya mapuratifomu, uye kune kuwedzera kwemuti uyu mudunhu. Zera rehuni harivanzi, uye zviso zvokunze uye zvemukati zvehuni zvinoshandiswa kugadzira manzwiro akasiyana. Imba inoyedza kukwereta tsika yezvakakomberedza uye kuvazivisa kuburikidza nenyaya inotaurirwa mumagadzirirwo uye tsananguro.
Zita rechirongwa : Dezanove, Vagadziri zita : iñaki leite, Izita remutengi : YourArchitectLondon.
Muvhuro 18 Ndira 2021
Oli Ndiro Yeorivhi Chitatu 20 Ndira
Bridal Veil Chandelier Chipiri 19 Ndira
Illusion Webhusaiti Muvhuro 18 Ndira
Mbudzi 2020 (90)
Gumiguru 2020 (93)
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Chitatu 20 Ndira
Dhizaina ngano yezuva Chipiri 19 Ndira
Dhizaini yezuva Muvhuro 18 Ndira
Mugadziri wezuva Svondo 17 Ndira
Dhizaini timu yezuva Mugovera 16 Ndira
Imba iñaki leite Dezanove